10 Ezumike Ezinụlọ Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Ezumike Ezinụlọ Na Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 11/06/2021)
Lush na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, echiche nnukwu kaniyon, osimiri, ma ọ bụ obodo ndị mara mma, Europe jupụtara na ebe dị ịtụnanya maka ịma ụlọ ezinụlọ. The 10 kasị mma ezinụlọ maa ụlọikwuu aga Europe na-zuru okè n'ihi n'oge okpomọkụ ememe, na ọbụna oyi. Ha niile nwere echiche mara mma na okike, ma nke kachasị mkpa maka ezumike ezinụlọ a na-agaghị echefu echefu na Europe.
1. Ezigbo ebe obibi ezinụlọ na-ama ụlọikwuu na Austria: High tauren
Obodo Fairytale, ala mara mma, na mbara ala Alps, na National park Hohe Tauren n'elu anyị 10 kacha mma ezinụlọ maa ụlọikwuu aga Europe. Ọmụmaatụ, otu ebe kachasị mma ịnọ ebe ahụ bụ Grossglockner nke na-eleghara ugwu Grossglockner a ma ama ma ọ kachasị elu na Austria.
Na mgbakwunye, Innergschloss na East Tirol nwere echiche kachasị mma banyere Alps, yabụ maa otu n’ime ebe kachasị mma maka njem na ezin’ụlọ. Another Hohe Tauren highlight is the 600-year-old larch forest of Zedlach, ebe ị ga-ahụ ntụpọ dị ịtụnanya maka a picnic ezinụlọ.
ikwubi, ezinụlọ ezinụlọ mara ụlọikwuu na Hohe Tauren National Park ga-abụ ahụmahụ a na-agaghị echefu echefu maka ezinụlọ dum. Iji bulie ya niile, ị nwere ike ịmalite ezumike ezumike gị na Austria site na njem site na ụgbọ oloko na gburugburu ebe obibi ICE.
2. Ebe Ezigbo Ezinụlọ Ezinụlọ Na France: Ndagwurugwu Dordogne
Na ọmarịcha ndagwurugwu Dordogne, Maa ụlọikwuu Le Pontet dị n'akụkụ Osimiri Isle na nso nso Perigord chateaux mara mma. Le Pontet, you ga-ahụ ebe obibi ezinụlọ 3-kpakpando mara mma nke nwere ebe obibi mara ụlọikwuu ma na-agagharị agagharị mgbazinye ụlọ. Ya mere, ebe umuaka na-agba mmiri n'ọdọ mmiri, ị nwere ike ịnụ ụtọ ịkụ azụ ma ọ bụ ịnwụ anwụ. Na ntule ndịiche, ị nwere ike ịgbago ruo oge a ga-ahụ ya ma nwee mmasị na ndagwurugwu Dordogne – Zuru oke maka foto ezinụlọ.
Ogige ụlọ ezinụlọ Le Pontet dị na mpaghara mara mma nke Rhone-Alps, nso Ardeche Gorges ihe ndozi. Ya mere, ị ga-enwe oge dị ịtụnanya na-enyocha ihe okike, ihe ndị dị egwu dị n'èzí dị ka njem njem na ịgba ígwè, na ịmụrụ anwụ na ikuku ọhụrụ.
Lyon ka Nice na a ụgbọ oloko
Paris na Nice na A Train
Cannes na Paris Na A Train
Cannes ka Lyon na A Train
3. Family Camping Ty Nadan In Brittany, France
N’otu n’ime ebe ndị mara mma na Europe, Ty Nadan dị na Brittany bụ ebe ezinụlọ zuru oke na-ama ụlọikwuu. Otu n'ime elele nke saịtị mara ụlọikwuu Ty Nadan bụ na ebe ahụ jikọtara okike na osimiri. Ya mere, ị nwere ike ịhọrọ n'etiti ịkpọrọ ụmụ gị n'oké osimiri, rụọ ájá ma lelee ọdịda anyanwụ, ịkwọ ụgbọ mmiri ma ọ bụ ịrị osisi. Ebe a mara ụlọikwuu dị mma 20 nkeji si n'ụsọ osimiri dị na Brittany.
Ọzọkwa, the campsite is great for a family vacation with small children and babies. Thanks to a baby gear pack and kids’ ntụrụndụ na mgbede. Ya mere, ị ga-enwerịrị ezinụlọ ị na-agaghị echefu echefu na-ama ụlọikwuu n'oge a ma ama n'ụsọ osimiri Brittany.
The Hague na Paris na A Train
Luxembourg na Paris na A Train
Ime iji Paris na A Train
4. Maa ụlọikwuu Na Netherlands: Gelderland
Ulo na-acha odo odo tulips na Veluwe, Gelderland bụ ịtụnanya ezinụlọ maa ụlọikwuu ebe na Netherlands. Gi na umuaka gha acho Veluwe national park na anụ ọhịa, na 200 ubi nke Appeltern.
Jutberg na Ackerstate dị nnọọ 2 nke ọtụtụ ebe ndị mara ụlọikwuu na Gelderland, ebe ị nwere ike ịpasa ụgbọ ala gị ma ọ bụ ụlọ ntu. Netherlands bụ ebe magburu onwe ya maka ezumike ezinụlọ, kpomkwem n'ihi na enwere otutu ebe mara nma ichoputa umuaka ma obu umuaka na umuaka.
5. Ezigbo Ezinụlọ Ezinụlọ Na Bavaria Germany
Home na osimiri Danube na ubi vaịn Franconia, Bavaria bụ ebe mara ụlọikwuu mara mma maka ezinụlọ. Cheedị mgbe ị ga-apụ n'ụgbọ gị ma ọ bụ n'ụlọ ntu gị, gaa n'ubi vaịn ndị na-atọ ụtọ, mgbe otu ụbọchị nke ahụmahụ ezinụlọ na ọdịdị.
Gba ọsọ n’elu ugwu ma ọ bụ ịgagharị gburugburu Oke ohia Bavaria, na-achọ anụ ọhịa, butterflies, na nnụnụ ndị na-adịghị ahụkebe – Bavaria bụ ebe magburu onwe ya na-ama ụlọikwuu n'oge okpomọkụ. Na mgbakwunye, ị ga-ahụ na mpaghara jupụtara na ọdọ mmiri dị ịtụnanya, Ogige Neuschwanstein maka ndị ọchịagha na ụmụ eze, iji mezue ezumike ezumike ezinụlọ zuru oke.
6. Ezinụlọ na-ama ụlọikwuu na Black Forest
Site na nnụnụ ma ọ bụ miri emi n'ọhịa, ọhịa ojii dị na Germany bụ otu n'ime ihe ndị na-akpali akpali ma mara mma n'ụwa. Ga-ahụ ọtụtụ ebe ị ga-ama ụlọikwuu na mpaghara Black Forest ebe ọ bụ na ị mara ụlọikwuu na-ewu ewu na Germany.
Ya mere, ị nwere ike họrọ ị dọba gị adọkpụ nso obodo oge ochie, ma ọ bụ mara mma ọdọ mmiri na ugwu. Dị ka ọmụmaatụ, Campingplatz Weiherhof nke Titisee zuru oke maka ezumike ezinụlọ ezumike, mgbe Wolfach mara ụlọikwuu dị mma maka njem na ịgba ígwè.
7. Ezumike ezinụlọ na Tuscany Italy
Maa ụlọikwuu na Tuscany ga-abụ oge ezumike ezinụlọ gị kachasị atọ ụtọ. The ugwu ukwu silky, ubi-vine, obodo cheese, na truffles emewo Tuscany culinary heaven. Enwekwara pasta na pizzas maka umuaka, ebe ndị nne na nna na-anụ ụtọ ọtụtụ nri mpaghara.
N'iburu nke a n'uche, Tuscany na-enye ọtụtụ ezinụlọ ihe omume na-atọ ụtọ, dị ka ogige mmiri. N'ebe a, ị nwere ike ịnọdụ ala mgbe ụmụaka na-agbapụ na mmiri, mgbe ị gachara njem ụbọchị gị gaa obodo ndị dị nso, Pisa na Sienna.
Na okwu – ezigbo, Tuscany bụ ezigbo ebe obibi ezinụlọ na-ama ụlọikwuu na Europe, ihe nzuzo mara ụlọikwuu zoro ezo n'ezie.
Milan ka Naples Na A Train
Florence gaa Naples na ụgbọ oloko
Venice na Naples Na A Train
Pisa na Naples Na A Train
8. Ezigbo ebe obibi ezinụlọ na Switzerland: Ọdọ mmiri Switzerland Alpine
Maa ụlọikwuu okomoko ma ọ bụ n'ụlọ ntu gị ma ọ bụ ụgbọ ala gị, na Switzerland Alps nwere ebe dị egwu and budget-friendly family camping places. If you are planning family camping in the summer, mgbe ahụ ogige ebe obibi nke Arolla na Switzerland Alps zuru oke, ebe ọ nọ n’elu ugwu. Lee ị ga-enwe breathtaking echiche, oyi okpomọkụ, na ọtụtụ hiking ụzọ ụkwụ.
Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ọzọ izuike ahụmahụ, mgbe ahụ ka ụlọikwuu n'akụkụ ọdọ mmiri dị mma. Firstly, ọ bụrụ na ọ dị ọkụ, ị pụrụ ịmaba n’ime ọdọ. Nke abuo, ị ga-enwe echiche mara mma, n’emeghị njem nke ukwuu site na kamper gị.
Ihe bụ isi bụ na Switzerland Alps na-enye ọtụtụ ebe ị mara ụlọikwuu. Site na ezumike gaa ezumike ezumike, ọdọ mmiri ma ọ bụ echiche ugwu – Ihe niile dị ịtụnanya.
9. Ezigbo Ezumike Ezinụlọ Ezinyere Na Italytali: Brione Campsite Na Ọdọ Garda
Na isi nke Ọdọ Garda, 4-kpakpando Camping Brione bụ a dreamy ezinụlọ maa ụlọikwuu ebe ke Italy. Ibili na echiche nke ọdọ, na-awụlị maka igwu mmiri, ma ọ bụ inwe nri abalị ezinụlọ na mpụga ụlọikwuu gị na otu n'ime ebe kachasị mma n'ụwa n'ụwa n'azụ gị, bụ ezigbo uzommeputa maka ezinụlọ fun.
Maa ụlọikwuu Brione nwere 20 tent, na 39 mgbazinye ụlọ maka mgbazinye, ọkụ eletrik, na ọmarịcha ụlọ ọrụ, tinyere ime ụlọ. Ọ bụrụ na ezinụlọ gị bụ onye na-arụsi ọrụ ike, mgbe ahụ ị nwere ike ịgbazite igwe kwụ otu ebe ma gaa njem na gburugburu ọdọ mmiri na ugwu, ma ọ bụ nwee egwuregwu mmiri. N'akụkụ aka nke ọzọ, ị nwekwara ike zuo ike n'akụkụ ọdọ mmiri na ebe a na-ama ụlọikwuu ma ọ bụ n'akụkụ osimiri n'akụkụ ọdọ mmiri ma nwee oge ezumike ezinụlọ.
10. Ebe a mara ụlọikwuu na Europe: Ọgba Verdon
Na nsọtụ nke Gorges du Verdon, na ndị nọ n'afọ iri na ụma na ebe obibi-enyi na enyi, na ọdọ ngosi ma ọ bụ na a okomoko maa ụlọikwuu mgbagwoju, ezinụlọ na-ama ụlọikwuu na Gorges du Verdon enwebeghị obi ụtọ karịa. Gorges du Verdon bụ otu n’ime ihe kachasị ịtụnanya n’ụwa na ụwa, na zuru oke maka ezinụlọ na-ama ụlọikwuu n'oge okpomọkụ.
Ọ dị nso na ọdọ mmiri na ọdọ mmiri ndị dị ya nso, enwere otutu ihe omume mmiri nye ezinụlọ dum. Ọmụmaatụ, enwere ogige ntụrụndụ na ọdọ mmiri n'ọtụtụ ebe izu ike na mpaghara ahụ, ka i wee zuru ike n'akụkụ mmiri. N'otu oge ahụ, ị nwere ike ịga ịgagharị n’otu n’ime ụzọ egwu ịtụnanya, n'ime okike dị ebube.
Na mkpokọta – Naanị mee nyocha gị Ọgba Verdon maa ụlọikwuu na ntinye akwụkwọ n'ọdịnihu, ebe ọ bụ na nke a bụ ebe a ma ama maka ezinụlọ ịma ụlọikwuu, ị ga-enwekwa ntikpọ.
Nice ka Marseilles Na A Train
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi njem gị na 10 Best Family Camping aga Europe ụgbọ okporo.
You chọrọ Embed anyị blog post “10 Best Family Camping Destitors In Europe” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffamily-camping-destinations-europe%2F%3Flang%3Digየሰማይ አካላት - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / ru na / fr ma ọ bụ / de na ndị ọzọ asụsụ.
maa ụlọikwuu CampingDestinations CampingDestinationsEurope Campingwithkids Familycamping Familytripeurope LuxuryCampingEurope ụlọikwuu
Njem ụgbọ oloko, Train Travel France, Inzọ Njem Italytali, Train Travel Switzerland, Zụọnụ Ndụmọdụ, Train Travel UK, Travel Europe